Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) - Hello Sayarwon
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း)
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) ကဘာလဲ။
လည်ပင်းရိုးထိခိုက်ရောင်ရမ်းခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဇက်ကျောရိုးမကြီးမှာရှိတဲ့ အရွတ်နဲ့ အရိုးတွေထိခိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတယ်။ အသက်အရွယ်အလိုက်ဖြစ်ပေမယ့် တချို့သော ရောဂါဖြစ်ခြင်းကို အားပေးတဲ့အချက်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေများနိုင်ပါတယ်။ တချို့အတွက်တော့ နာတာရှည်ပြင်းထန်စွာ ဇက်တောင့်ခြင်း၊ နာခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်းများဖြစ်နိုင်ပြီး အများစုကတော့ ပုံမှန်နေ့စဉ်အလုပ်တွေကို အနှောင့်အယှက်မရှိ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက် ၆၀ ကျော်လူတွေရဲ့ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ ဖြစ်တတ်ပြီး တချို့ကတော့ လုံးဝလက္ခဏာမခံစားရပါဘူး။
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အများစုကလက္ခဏာမခံစားရတတ်ပါဘူး။ ခံစားရမယ်ဆိုရင်လည်း လက္ခဏာတွေကတော့ ရုတ်တရတ် ဒါမှမဟုတ် ဖြေးဖြေးချင်းပေါ်လာနိုင်ပြီး သာမန်ကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိရှိနိုင်ပါတယ်။
လူသိများတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုကတော့ ပုခုံးရိုးတလျှောက်နာကျင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ လက်မောင်းနဲ့ လက်ချောင်းတွေထိ နာကျင်နိုင်ပါတယ။်
ခေါင်းမော့ခြင်း တွေကြောင့် နာကျင်မှုပိုဆိုးနိုင်တယ်။
တခြားလက္ခဏာကတော့ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်းဖြစ်တယ်။ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်းကြောင့် လက်မြှောက်ခြင်း၊ အရာဝတ္ထုများကိုခိုင်မြဲစွာဆုပ်ကိုင်ရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဇက်တောင့်ခြင်း – တဖြေးဖြေးပိုဆိုးလာတတ်တယ်။
ခေါင်းကိုက်ခြင်း – များသောအားဖြင့် ခေါင်းနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တတတ်တယ်။
ပုခုံး၊ လက်မောင်းတို့မှာထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်း၊ – ခြေထောက်မှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
လည်ပင်းမှာရှိတဲ့ အရိုးနဲ့အရွတ်တွေ ထိခိုက်ပွန်းမိတဲ့အခါ ထိုရောဂါဖြစ်၇ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေကတော့-
ကျောရိုးမကြီးကိုထောက်ပံ့ဖို့ ခန္ဓါကိုယ်ကနေ အရိုးအပိုများထွက်စေခြင်းဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ထိုအရိုးအပိုပိုင်းက အာရုံကြောမကြီး၊ အာရုံကြောများကို သွားပိမိပြီး နာကျင်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျောရိုးဆစ်ကြားရှိ အရိုးပြားများ အရည်ခမ်းခြင်း
ကျောရိုးဆစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ အရိုးပြားလေးတွေရှိပြီး ထိုအရိုးပြားလေးတွေက ထူထဲကာ အလေးမခြင်း၊ လိမ်ခြင်း နဲ့ တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ အားကို စုပ်ယူပေး၊ ခံထားပေးပါတယ်။ ထိုအရိုးပြားများအတွင်းရှိ ဂျယ်လ်ပုံစံ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဟာ အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ ခမ်းခြောက်သွားတယ်။ ထိုအခါ ကျောရိုးဆစ်များ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပွတ်တိုက်မိပြီး နာကျင်ခြင်းဖြစ်စေပါတယ်။
အရိုးပြားများကွဲအက်သွားပြီး အတွင်းရှိပစည်းများ ထွက်လာကာ အာရုံကြောမကြီးနဲ့ တခြားအာရုံကြောငယ်လေးတွေကို ဖိမိခြင်းကြောင့် ထုံခြင်း၊ ကျဉ်ခြင်းများဖြစ်လာစေပါတယ်။
ယာဉ်မတော်တဆ သို့ အမြင့်မှပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် လည်ပင်းထိခိုက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်သွားပါက ရောဂါရနိုင်ချေများပါတယ်။
ကျောရိုးမကြီးမှ အရိုးဆစ်များ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ထားသော အရွတ်တွေက အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ တောင့်တင်းလာပြီး လည်ပင်းလှုပ်ရှားမှုအပေါ်သက်ရောက်ကာ ဇက်တောင့်စေတတ်ပါတယ်။.
အလေးပင်မခြင်းကဲ့သို့ အလုပ်များ၊ ဒါမှမဟုတ် တချို့သော ဝါသနာပါကအလုပ်များကြောင့် ထပ်ကာထပ်ကာလှုပ်၇ှားနေရပါက ကျောရိုးမပေါ်တွင် ဖိအားများစေပြီး စောစီးစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အဓိကအချက်ကတော့ အသက်ကြီးလာခြင်းဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ လည်ပင်းရိုးအဆစ်တွေ ပြောင်းလဲလာပြီး cervical spondylosis ဖြစ်လာရပါတယ်။ အဆစ်ကြားအရိုးပြားထိခိုက်ခြင်း၊ ကျွံခြင်း၊ အရည်ခမ်းခြင်း၊ အရိုးအတက်ထွက်ခြင်းတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပြီး အောက်ပါအချက်တွေကြောင့်လည်း ရောဂါရနိုင်ချေများပါတယ်။ –
ပုံစံမမှန်သောအနေအထားတွင် အချိန်ကြာရှိခြင်း သို့ လည်ပင်းလှုပ်ရှားမှုထပ်ကာထပ်ကာလုပ်ရခြင်း
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
တကယ်လို့သင့်မှာဒီရောဂါရှိနေတယ်လို့ ဆရာဝန်ကသံသယရှိပါက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ တခြားစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေကတော့ အလိုအလျောက်တုံ့ပြန်စွမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ကြွက်သားများအားနည်းခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ အာရုံခံနိုင်စွမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လည်ပင်းလှုပ်၇ှားနိုင်စွမ်းစစ်ဆေးခြင်း တို့ဖြစ်တယ်။ သင့်လမ်းလျှောက်ပုံကိုလည်းစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ထိုစစ်ဆေးမှုတွေအားလုံးက သင့်အာရုံကြောမကြီးနဲ့ တခြားအာရုံကြောတွေကို ဖိအားသက်ရောက်မှုခံနေရခြင်းရှိမရှိ သိရှိစေပါလိမ့်မယ်။
ဓါတ်မှန် – အရိုးအတက်ထွက်ခြင်းနဲ့ တခြားပုံမှန်မဟုတ်ခြင်းတို့ကိုသိနိုင်တယ်။
စီတီရိုက်ခြင်း – လည်ပင်း၏ပုံရိပ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြတယ်။
သံလိုက်ဓါတ်မှန် – ရေဒီယိုလှိုင်းနဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းကိုသုံးကာ ထိခိုက်နေသော အာရုံကြောတည်နေရာကိုရှာနိုင်တယ်။
Myelogram – ဆိုးဆေးတစ်မျိုးထိုးကာ ကြောရိုးမကြီးရဲ့ လိုချင်တဲ့နေရာကို အသားပေးဖော်ပြတယ်။ ထိုနေရာရဲ့ အသေးစိတ်ပုံရိပ်ကိုတော့ စီတီဖတ်ခြင်း သို့ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်သိနိုင်ပါတယ်။
EMG – ကြွက်သားများဆီသို့ အချက်ပြမှုများပို့ဆောင်ရာမှာ အာရုံကြောများလုပ်ဆောင်မှုပုံမှန်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါတယ်။
Cervical Spondylosis (လည်ပင်းကြီးပေါင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုကတော့ နာကျင်ခြင်းသက်သာစေရန်၊ ထာဝရမပျက်စီးသွားဘဲ ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်ရောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲ အာနိသင်ရှိတဲ့ နည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း – လည်ပင်းကြွက်သားများ၊ ပုခုံးကြွက်သားများဆန့်ခြင်းကုထုံးဟာ ကြွက်သားများသန်မာစေပြီး နာကျင်မှုသက်သာစေတယ်။ အလေးတုံးများသုံးကာ လည်ပင်းဆွဲခြင်းဖြင့် လည်ပင်းအရိုးဆစ်များတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားနေရာရပြီး အရိုးပြားနဲ့ အာရုံကြောအမြစ်ပေါ်ဖိအားသက်ရောက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ဆေးဝါးကုသမှု – သာမန်ဝယ်ယူရသောဆေးများဖြင့် အဆင်မပြေပါက အောက်ပါဆေးများညွှန်းပါလိမ့်မယ် –
ကြွက်သားများဖြေလျော့ဆေး – cyclobenzaprine
နာကျင်မှုသက်သာစေသောဆေးများ – Narcotics
အာရုံကြောများထိခိုက်ခြင်းကြောင့်ရသည့် နာကျင်မှုသက်သာစေရန် – Anti-epileptic drugs
တစ်သျှူးများရောင်ရမ်းခြင်းကိုသက်သာပြီး နာကျင်မှုလျော့စေသောစတီးရွိုက်ထိုးဆေး – prednisone
ရောဂါပြင်းထန်ပြီး တခြားကုသမှုများအဆင်မပြေပါက ခွဲစိတ်ရန်လိုနိုင်ပါတယ်။ အရိုးအတက်ထွက်ခြင်း၊ အရိုးပြားကျွံခြင်းတို့မှာခွဲစိတ်ရနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ခွဲဖို့မလိုတာများပါတယ်။ အရမ်းနာကျင်နေရင်၊ လက်လှုပ်ရှားမှုတွေပါထိခိုက်လာရင် ထိုအချိန်တွေမှ ခွဲဖို့အကြံပြုတတ်ပါတယ်။
ရောင်ရမ်းနေသောကြွက်သားများ နာကျင်မှုသက်သာစေရန် ရေနွေးအိတ် သို့ ရေခဲအိတ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။
ယာယီသက်သာဖို့အတွက် လည်ပင်းအပတ် ပတ်ထားနိုင်ပေမယ့် အချိန်ကြာပတ်ထားပါက ကြွက်သားများအားနည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 13, 2018
Cervical spondylosis. http://www.webmd.com/osteoarthritis/guide/cervical-osteoarthritis-cervical-spondylosis#1 . Accessed December 28, 2016.
Cervical spondylosis . http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cervical-spondylosis/basics/definition/con-20027408 . Accessed December 28, 2016.
Cervical spondylosis . http://www.healthline.com/health/cervical-spondylosis#HomeTreatment8
ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, ကျန်းမာရေးစင်တာ
က််န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား A-Z, ကျန်းမာခြင်းနည်းလမ်းများ, ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း